Qaraxyo gawaari lagu xiray oo ka dhacay magaalada Muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
Degmooyinka Waaberi iyo Dharkeynleey ee magaaladda Muqdisho waxaa maanta ka dhacay laba qarax oo Are you in need of cheap depakote, but unable to find it? Buy in for just 1.03 right here! ahaa nooca gawaarida lagu xiro.
Qaraxa hore ayaa ahaa mid ka dhacay isgoyska kaddib markii uu qarxay gaari nooca yaryar ah, hase yeeshee wax qasaare ah kama dhalan intii aanay gaarin ciidamada amniga oo loogu yeeray inay gaarigaasi qaraxa ka furaan.
Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in qaraxa labaad uu ahaa isna ahaa mid gaarigiisa loogu xiray xildhibaan ka tirsan Golaha Baarlamaanka Federaalka ee ka soo galay maamulka Hirshabelle kaasi oo ka dhacay degmada Dharkeenley.
Ma jirto ilaa iyo hadda wax qasaare ah oo soo gaaray qaraxa lala eegtay gaariga uu watay xildhibaanka, waxaana taliyaha Booliska saldhigga degmada Dharkeenley uu sheegay in qaraxaasi aanu geysan wax qasaare ah.
Dhinaca kale falalka qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ayaa maalmahaan ku soo badanaya magaalada Muqdisho, kuwaasi oo qaarkood ay sheegtaan ururka Al-Shabaab.
Maqaal (Tan oo kale waa nagu dhacdaa): Murankii kabaha ee masjidka